Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Urinary tract infections ဆီးလမ်း (လိင်လမ်း) ပိုးဝင်ခြင်း
Urinary tract infections ဆီးလမ်း (လိင်လမ်း) ပိုးဝင်ခြင်း
I ama28 years old single woman. According to your Blog-post I thought that I have some infections in urine because I often get acidic urine. Acidic urine is not from the time I had intercourse with my partner, it is from the age around 20 till this day. Why habitually I get acidic urine and got pain during intercourse? Please advise me some appropriate medicines and suggestions.
လူရဲ့ဆီးဟာ ပုံမှန်ကိုက အက်စစ်လိုဘဲ။ ပူစပ်စပ်နေတယ်။ ဓါတုဗေဒလို အက်စစ်ဓါတ်ကို pH နဲ့ တိုင်းရတယ်။ ဆီးက pH 5.8 နဲ့7အတွင်း ရှိတာ ပုံမှန်ဖြစ်တယ်။ ဆီးလမ်း ပိုးဝင်နေရင် pH နည်းနေတာ တွေ့ရတယ်။ ကြာသွားပြန်ရင် တမျိုး ဖြစ်ပြန်တယ်။ pH များတာကို (အယ်လ်ကာလိုင်း) ဖြစ်နေတယ် ခေါ်တယ်။ ဒါလည်း မကောင်းဘူး။ ဗီတာမင် စီ Ascorbic acid ကို ပြောင်းပြန် မှတ်ပါ အက်စစ် လျှော့စေနိုင်တယ်။
ဆီး အက်စစ်ဓါတ် များစေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကတော့ -
• Acidic food အက်စစ်များစေတဲ့ အစားအသောက်တွေစားတာ၊
• Starvation အစာငတ်ခံတာ၊
• Diarrhea ဝမ်းပျက်တာ၊
• Diabetes ဆီးချိုရှိတာ၊
• Dehydration ရေ-ဆားဓါတ် နည်းသွားတာ၊
• Respiratory diseases အသက်ရှူလမ်း ရောဂါ တချို့တို့ ပါဝင်တယ်။
Medication ဆီးလမ်းပိုးဝင်ခြင်းအတွက် ဆေးများ
• ပဋိဇီဝဆေးများ၊ လိင်ဆက်ဆံပြီးရင်တောင်မှ ပဋိဇီဝဆေး တကြိမ်သောက်ဘို့ ညွှန်တယ်။ ဆီးအောင့်တယ်လို့ ခံစားရရင် ၂-၃ ရက်ဆက် သောက်ရမယ်။ Co-trimoxazole = Septrin (Trimethoprim 160 mg + Sulfamethoxazole 800 mg) ဒါမှမဟုတ် Amoxacilin 500 mg ဒါမှမဟုတ် Ciprofloxacin 500 mg တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ပေါင်း ၄-၅ ရက်သောက်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Nitrofurantoin 100 mg တနေ့ ၂-၄ ကြိမ် ၇ ရက်သောက်ပါ။
Aug 12, 2010 at 3:29 AM
Q: I have one more thing to ask you concerning the pain which I forget to tell you that is when I am doing for urine it is very hot (just like eatingalot of chilly and get hot) inside of my penis. I could not be able to pass out all the urine as much as I can because it is hot and painful. I hope that I have some infection. PLZ give me some more clarification of it.
ဘာသာပြန်။ ကျားအင်္ဂါ နာတာမေးတုံးက ကျွန်တော် မေးဘို့ ကျန်သွားတာတခု ရှိသေးတယ်။ ဆီးသွားရင် လိင်အင်္ဂါမှာ အရမ်းပူတယ်။ ငရုပ်သီးတွေ အရမ်းကာရော စားထားတာကြနေတာဘဲ။ ဆီးတောင် ကုန်အောင် မပေါက်နိုင်ဘူး။ ရောဂါ တခုခု ဝင်နေပြီ ထင်တယ် ဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေပေးပါအုံး။
Gonorrhea (ဂနို) ရောဂါကို အရပ်ထဲမှာ “ဆီးပူ-ညောင်းကျ ရောဂါ” လို့ ခေါ်တတ်တယ်။ ရောဂါရှိနေသူများ ဆီးကပူ၊ လူကြည့်ရတာ ညောင်နာနာ၊ ပုဆိုးကို လက်နဲ့မ လမ်းသွားရရှာလို့ပါ။
သွေးကို ကျောက်ကပ်ထဲ ရောက်ပြီး စစ်ထုတ်လိုက်ရင် ဆီးဆိုတာ ဖြစ်လာတယ်။ ဘယ်အရည်မဆို စစ်ကြည့်ရင် (အက်စစ်) ဒါမှမဟုတ် (အယ်လ်ကာလီ) ဖြစ်တယ်။ ဆန်းတော့ ဆန်းတယ်။ သွေးက (အယ်လ်ကာလီ)၊ ဆီးက (အက်စစ်)။ ဓါတုဗေဒ သင်ဘူးသူများ သိပါတယ်။ စစ်ရင် Ph ဆိုတာနဲ့ တိုင်းတယ်။ Ph7ထက် နည်းရင် အက်စစ်၊ များရင် (အယ်လ်ကာလီ)။
ပြုံးစရာတခု ပြောအုံးမယ်။ ဆေးပညာ မသိရင် ကျန်းမာရေး၊ ဥပဒေ မသိရင် တရားသူကြီး ဖြစ်ရတဲ့ ခေတ်ကပေါ့။ စက်ရုံ တခုကို ဝန်ကြီးလုပ်ရသူက သွားစစ်တယ်။ အင်ဂျင်နီယာကနေ အစီရင်ခံတာပေါ့။ “ဒီရေက (ပီ-အိတ်ခ်ျ) ၇ တိတိ ရှိပါတယ် ခင်ဗျား” ပေါ့။ ဒီတော့ ဝန်ကြီးက လိုအပ်သည်များ ပြန်လည် မှာကြားလိုက်တာက “နောက်တခါ ၇ ထက်များပါစေ” တဲ့။
ဆီးက အက်စစ်ဖြစ်နေတာမို့ အလိုလို နဲနဲ ပူစပ်စပ်နေတယ်။ ဆီးသိပ်ပူလာရင် မကောင်းဘူး။ အခံရ ခက်တာတင်မက ပိုးကလည်း အဲလိုနေရရင် ပျော်တယ်။ ပျောက်အောင်၊ သက်သာအောင် အစားအစာ ရွေးစားပါ။
အသား၊ ငါး၊ ဥ၊ အစေ့အဆံ၊ ပြောင်း-ပြောင်းဖူး၊ စပျစ်သီးခြောက်၊ ဘယ်ရီသီး၊ ကော်ဖီ၊ ချဉ်တဲ့ (ခရင်မ်)၊ ဝိုင်၊ ဒိန်ချဉ် (ရောဂတ်)၊ (ဘတ်တား-မစ်လ်ခ်)၊ တွေကို လျှော့ရ-ရှောင်ရမယ်။ အက်စစ် များစေတယ်။
ကောင်းတာတွေက လိမ်မော်၊ သံပုရာ၊ ကမ္ဗလာ၊ ငှက်ပျောသီး၊ ဖရဲသီး၊ အာလူး၊ ချော့ကလက်၊ ပဲတောင့်ရှည်။ အစာအိမ် လေနာအတွက် ပေးတဲ့ အက်စစ်ပျယ်ဆေး Antacids တွေကလည်း ကောင်းတယ်။ ဆီးကို အက်စစ်ဓါတ် လျှော့စေပါတယ်။
နည်းယူပြီး ဆီးပူ ပျောက်ပါစေ။
August 15, 2010 11:35 AM
(၁) Cefixime 400 mg နှင့် Ciprofloxacin 500 mg ဆေးတွေသည် လူနှင့် မတည့်တာများ ရှိပါသလား။
(၂) ဆီးလမ်းဝပြွန်ရောင် ရောဂါသည် လိင်ဆက်ဆံဖက်အဖေါ်ကို ကူးစက်နိုင်ပါသလားခင်ဗျာ။
(၃) မိမိလိင်တံကို oral sex လုပ်ရင် STDs နှင့် တခြားရောဂါများ မိမိကို ကူးစက်နိုင်ပါသလားခင်ဗျာ။
(၄) Uncomplicated Gonorrhea ၏ ရောဂါလက္ခဏာနှင့် ဆီးလမ်းဝပြွန်ရောင်ရောဂါများသည် ပန်းငုံနေသည့် လိင်တံတွင် ဘယ်လိုပုံစံမျုိုး ဖြစ်တတ်ပါသလဲဆရာ။
(၁) Cefixime 400 mg နှင့် Ciprofloxacin 500mg ဆေးတွေသည် လူနှင့်မတည့်တာများ ရှိပါသလား။
ဘယ်ဆေးမဆို မလိုချင်တဲ့ အကျိုးမျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Side effects, Adverse effects ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေက ဆေးထိုး-ဆေးသောက်ရသူ အတော်များများမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတာတွေပါ။ တယောက်နဲ့ တယောက် ဖြစ်တာခြင်း မတူကြဘူး။ Drug allergy ဆေးနဲ့ မတည့်ခြင်း ဆိုတာက လူတိုင်းမှာ မဖြစ်ဘဲ၊ တချို့လူတွေမှာသာ ဖြစ်တတ်တာမျိုး ပြောတာပါ။ နောက်ပြီး တွဲမပေးသင့်တဲ့ ဆေးတွေ ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်။
ဆေးရဲ့မကောင်းကျိုးတွေ ကြည့်ပြီး ဆေးကို မသုံးခြင်စရာတော့ ကောင်းပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာဝန်ကနေ ညွှန်ရင် ဆေးခါးကြီးမြိုခိုင်းသလို သဘောထားပြီး၊ အဆိုးကြီးနဲ့ ဘာမှ မဟုတ်လောက်တဲ့ အဆိုးသေးသေးလေး လဲသင့်ပါတယ်။
Cefixime ဆေးရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေကတော့-
အစာမကြေ၊ ဝမ်းပျက်၊ အန်တာ။ အရေပြားမှာ နီလာတာ၊ ခေါင်းကိုက်တာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပိုဆိုးတဲ့သူတွေမှာတော့ အရေပြားနီတဲ့အပြင် ယားမယ်၊ အပိန့်တွေ ထွက်မယ်၊ အသက်ရှူခက်လာမယ်၊ ရင်ကြပ်လာမယ်။
Ciprofloxacin ဆေးက Quinolone အုပ်စုထဲကဖြစ်လို့ သူ့ကိုမတည့်ရင် တခြား အုပ်စုဝင်တွေပါ မတည့်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
Gatifloxacin, Gemifloxacin, Levofloxacin, Lomefloxacin, Moxifloxacin, Nalidixic acid, Norfloxacin, Ofloxacin, Sparfloxacin တွေဖြစ်တယ်။
Warfarin, Certain antidepressants, Antipsychotics, Caffeine or Medications, Clozapine, Cyclosporine, Diuretics, Glyburide, Amiodarone, Disopyramide, Procainamide, Quinidine, Sotalol, Methotrexate, Metoclopramide, Ibuprofen, Naproxen, Phenytoin, Probenecid, Ropinirole, Theophylline ဆေးတွေနဲ့ တွဲ မပေးသင့်ဘူး။
Aluminum hydroxide, Magnesium hydroxide, Didanosine, Calcium, Iron, Zinc, Vitamin, Sucralfate တွေနဲ့ ဆိုရင် အချိန်ခြားပြီး ပေးတယ်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတာ၊ ကလေးနို့တိုက်နေတာဆိုလည်း သတိနဲ့ ပေးရတယ်။
Ciprofloxacin ဆေးရဲ့ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးတွေကတော့-
ပျို့-အန်၊ ဗိုက်နာ၊ ရင်ပူ၊ ဝမ်းပျက်၊ ဆီးသွားရင် မြန်မြန်သွားချင်၊ ခေါင်းကိုက်၊ မွေးလမ်းကြောင်းယား၊ ပိုဆိုးတဲ့သူတွေမှာ အရေပြားနီတဲ့အပြင် ယားမယ်၊ အပိန့်တွေထွက်မယ်၊ အဆစ်-ကြွက်သားနာ၊ ဖျား၊ အားယုတ်၊ အစားပျက်၊ မျက်လုံးဝါ၊ ဆီးနီ၊ အသက်ရှူခက်လာမယ်၊ ရင်ကြပ်လာမယ်။
စိတ်မကြည်တာ၊ အိပ်ခြင်တာ၊ ခေါင်းမူးတာဖြစ်တတ်လို့ ဆေးသောက်နေတုံး ကားမမောင်းသင့်ဘူး။ နေလောင်တာလည်း ရှောင်သင့်တယ်။ ကော်ဖီပြင်းပြင်း မသောက်သင့်ဘူး။ ရေများများ သောက်သင့်တယ်။
(၂) Urethritis ဆီးလမ်းဝပြွန်ရောင်ရောဂါဆိုတာ ဆီးသွားပြွန်မှာ ပိုးဝင်ပြီး ရောင်တာပါ။ ဆီးအိမ်ကနေ အပြင်ထွက်စေတဲ့ ပြွန် ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားတွေက ရှည်ပြီး၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ တိုတယ်။
လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ပိုးတွေ အပါအဝင် တခြားပိုးတွေလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပိုးဆိုတာ ဗက်တီးရီးယား၊ ဖန်းဂတ်စ်၊ ဗိုင်းရပ်စ် စုံတယ်။ စအိုနဲ့ နီးလို့ အစာလမ်းကပိုး ဆီးလမ်းကိုဝင်လာတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါမျိုးက ယေက်ျားတွေမှာ အဖြစ်နည်းတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဆီးလမ်းဝပြွန်ရောင်ရာကနေ ဆီးအိမ်ပါ ရောင်လာစေတတ်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံဖက် အဖေါ်ကို ကူးစက်နိုင်တယ်။
Gonorrhea (ဂနိုရီးယား) ယောက်ျားမှာ အဖြစ်များတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာလည်း Urethra ဆီးထွက်ပြွန်၊ Vagina မွေးလမ်းကြောင်း၊ Cervix သားအိမ်ဝ၊ Uterus သားအိမ်၊ Ovaries and Fallopian tubes မျိုးဥအိမ်နဲ့ သားအိမ်ပြွန် တွေအထိ ရောက်နိုင်တယ်။ Chlamydia နဲ့ Herpes simplex virus တွေလည်းဖြစ်တယ်။ Trichomonas ဆိုတဲ့ Parasite (ပါရာဆိုက်) ကလည်းဖြစ်စေနိုင်တယ်။ Escherichia coli ဗက်တီးရီးယား ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်။
ဆီးသွားရင် နာမယ်၊ ဆီးခဏခဏ သွားခြင်မယ်၊ ဆီးကို ဒရောသောပါး သွားခြင်မယ်။ ရောဂါလက္ခဏာ မပေါ်ဘဲ ပိုးရှိနေနိုင်တယ်။ ဆီးထဲမှာ သွေးပါလာတတ်တယ်၊ အနယ်ပါမယ်။ Gonorrhea နဲ့ Chlamydia ကြောင့်ဆိုရင် ယောက်ျားမှာ တခုခုပါ ဆင်းနိုင်တယ်။ (ကွန်ဒွန်) နဲ့ ကာကွယ်နိုင်တယ်။
ဆေးမကုဘဲထားရင်၊ ဆေးပါတ်မလည်ရင် Urethra ကျဉ်းသွားစေတတ်တယ်။ ပြည်ထွက်လာနိုင်တယ်။ နောက်ပိုင်း အထက်တက်ပြီး Bladder ဆီးအိမ်၊ Kidneys ကျောက်ကပ်တွေ ရောင်လာနိုင်တယ်။
• Gonorrhea အတွက် Injection Ceftriaxone နဲ့ Chlamydia အတွက် Azithromycin ဒါမှမဟုတ်
• Doxycycline သောက်ရမယ်။
• တခြားပိုးဆိုရင် Septein (Trimethoprim-sulfamethoxazole) ဒါမှမဟုတ်
• Ciprofloxacin ဆေး သောက်ခိုင်းတယ်။
• ဗိုင်းရပ်စ် ဆိုရင် Acyclovir ပေးတယ်။
အမျိုးသမီးတွေ Cystitis ဆီးအိမ်ရောင်ရင် Antibiotic ကို ၁ ရက်၊ ၃ ရက်၊ ၁ဝ ရက် ပေးတယ်။
• Cotrimoxazole (Septrin) ၂ ဆပြင်းဆေးပြား တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ဒါမှမဟုတ်
• Nitrofurantoin 100 mg ၁ ပြား ၄ ကြိမ်၊ ဒါမှမဟုတ်
• Amoxacilin 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ဒါမှမဟုတ်
• Ciprofloxacin 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ အနည်းဆုံး ၃ ရက်။
• လိင်ဆက်ဆံဘက် အသစ်ကနေဖြစ်ရင် Doxycycline 100 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၁ဝ ရက်။
• နာတာ သက်သာအောင် Anticholinergic effects ရှိတဲ့ဆေး (Buscopan ဒါမှမဟုတ် Diclofenic) ပါ ပေးတယ်။
Oral sex လုပ်ရင် STDs အပါအဝင် တချို့ရောဂါတွေ ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ အဓိက HIV, Hepatitis B, Hepatitis C တို့ ဖြစ်တယ်။ ပြုလုပ်သူရဲ့သွားရည်မှာ ပိုးပါနေမှ ကူးတယ်။ အပြုခံသူမှာ မဆက်ဆံခင်-ဆက်ဆံချိန် ထွက်တဲ့အရည်မှာ ပိုးပါနေမှ ကူးတယ်။ အပေါ်ယံအဖုံးလွှာ အနာအဆာ သေးသေးလေးရှိနေရင် ကူးတယ်။ (ကွန်ဒွန်) နဲ့ ကာကွယ်နိုင်တယ်။
ဆီးထွက်ပြွန်မှာ ဖြစ်နေလို့ အပြင်ပမ်းက ထူးခြင်မှ ထူးမယ်။ အရည်ထွက်ရင်တော့ သိသာမယ်။